I-Bijou Dreamland ---Ilula futhi inamaphupho amahle - I-Airbnb
I-Bijou Dreamland ---Ilula futhi inamaphupho amahle
Ottawa, Ontario, i-Canada
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Catherine Kelly
Phumula kalula futhi ube namaphupho amahle phakathi kwefenisha yesitayela sase-France ekamelweni lethu elithandwa kakhulu. Konke kuphakathi nebanga lokuhanjwa ngezinyawo: izindawo ezikhangayo ezinkulu ( iPhalamende Hill, i-Cruiseau Canal, namamnyuziyamu), izitolo zokuthenga, izindawo zokudlela, njll.;
Izici zomsebenzi ezikude
1. I-inthanethi ye-Inthanethi
ye-Farica 1gbps 2. Ideski elizinikezele endaweni yomphakathi
3. Ikamelo lokudlela lingasetshenziswa futhi njengendawo yokusebenzela, igumbi lokuhlangana.
Isivakashi singadawuniloda i-app ye-fibe tv futhi sijabulele izinhlelo ezihlukahlukene ze-TV phakathi nokuhlala.
Indawo iza negceke langaphambili elihlanganyelwayo, igumbi lokuphumula, igumbi lokuhlanza izingubo, igumbi lokudlela, ikhishi nendawo yokufunda, konke okutholakalayo ukuze ukusebenzise.
Ihlomele ngokugcwele ukusebenza kude nemicimbi emincane yokwakha iqembu. (Qaphela ukuthi kufanele ukhokhe ukuze usebenzise ikamelo lelondolo, futhi inani alifakiwe enanini lendlu.)
ubusuku obungu-7 e- Ottawa
4.71 · 24 okushiwo abanye
Izinto ezikhangayo ezinkulu njengePhalamende Hill kanye neRideau Canal ekhoneni(5-10mins' ukuhamba); Eduze kwedolobha lase-China lapho ungahlola khona ukunambitheka kwe-Asian exotic kanye ne-Rideau Centre, inxanxathela yezitolo enkulu kunazo zonke edolobheni.
Ibungazwe ngu-Catherine Kelly
Sicela uthumele umyalezo kanye ne-imeyili uma unemibuzo, ngizobuyela kuwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kodwa ngicela ungashayi ucingo, coz ngingase ngibe matasa futhi ngingakwazi ukuthatha. Siyabonga ngokuqonda kwakho.
Inombolo yepholisi: STR-826-901
Hlola ezinye izinketho ezise- Ottawa namaphethelo